I-Cannelloni gratin kunye ne-tofu kunye nama-mushroom | IBezzia
I-Tofu kunye ne-mushroom gratin cannelloni
UMaria vazquez | 04/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 29/04/2021 20:17 | IPasta
Namhlanje e-Bezzia silungelelanisa iresiphi yesiko le-cannelloni kwi ukutya kwe vegan. Iziphumo zezi tofu kunye ne-mushroom gratin cannelloni ukuba imifanekiso ayenzi bulungisa kuyo. Crispy cannelloni ngaphandle ngokuzalisa okumnandi kakhulu.
Itswele, ipepile, iminqathe, amakhowa kunye netofu, ezo zizithako zokugcwaliswa. Ukuzaliswa onako nako lungiselela nezinye iiproteni zemifuno njenge tempeh, iimbotyi zesoya ezinombala okanye ii-ertyisi ezenziwe ngombala ukunika imizekelo embalwa, ukuze ungakudiki.
Kwaye ukwenza isitya esahlukileyo yonke imihla ungadlala kunye nesosi. I-Gratin ngeshizi encinci ye-vegan yiyo yonke into oyifunayo ukukhonza isidlo esikhulu, kodwa ukuba uyongeza isosi eyenziwe ngobisi lwekhokhonathi ngolu hlobo okanye i-vegan béchamel ... isiphumo siya kuba lishumi. Ngaba unesibindi sokuzilungiselela?
1 Izithako ze-12-14 cannelloni
Izithako ze-12-14 cannelloni
1 itswele encinci, egayiweyo
Iinqathe ezi-2, ezinqunqiweyo
I-1/2 eluhlaza yentsimbi, icoliwe
I-1/2 ebomvu yentsimbi, isikiwe
Amakhowa ali-10, aqoshiwe
200 g. tofu, inqunyiwe
Iipuniwe ezi-4 zityumkile itumato
1 ithisipuni unamathisele utamatisi
I-1/2 ithisipuni ye-paprika (iswiti kunye / okanye iziqholo)
Iipleyiti ezili-14 ze-cannelloni
Iiglasi ezi-3 zobisi lwekhokhonathi
Ityiwa kunye nepelepele ukunambitha
80 g. itshizi egalelwe i-vegan enyibilika kakuhle
Kwipani yokucoca ngeepunipoli ezimbini zeoyile susa itswele, ipepile kunye nomnqathe imizuzu eli-8.
Ke yongeza ama-mushroom kunye ne-tofu kwaye upheke imizuzu embalwa de amakhowa athathe umbala.
Yongeza iitumato, Xuba kwaye upheke enye imizuzu embalwa ukuze ilahlekelwe yinxalenye yamanzi ayo.
Ukugqiba ukulungiselela ukuzaliswa, ityuwa kunye nepepile ukungcamla, yongeza i-paprika kunye nokudibanisa.
Ngoku pheka iipleyiti ze-cannelloni epanini kunye namanzi amaninzi anetyuwa elandela imiyalelo yomenzi.
Nje ukuba kuphekwe kwaye kuxutywe, beka icephe lokugcwalisa nganye nganye, qengqeleka kwaye uhambe ubeke i-cannelloni kwisitya esinye okanye nangaphezulu ezikhuselekileyo eziko.
Xa ugqibile, lungisa isosi ukufudumeza ubisi lwekhokhonathi kunye ne-nutmeg, ityuwa, ipepile kunye nesiqingatha seshizi epanini, de ibe idityanisiwe.
Thela kwisiqingatha sesosi ngaphezulu kwe-cannelloni, sasaza itshizi esele kwaye uthele isosi eseleyo kuyo. Isosi akufuneki igubungele i-cannelloni, kodwa kufuneka ifikelele ubuncinci kwi-2/3 yokuphakama kwayo.
Thatha kwi-oven eshushu ngaphambili kunye gratin imizuzu eli-10-15 okanye kude kube yigolide.
Ncedisa i-tofu eshushu kunye ne-mushroom i-cannelloni gratin.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » IPasta » I-Tofu kunye ne-mushroom gratin cannelloni
Iindlela ezi-5 zokucwangcisa ingqokelela yakho yeencwadi
Ungayitshintsha njani indawo yakho yangasese ngendlela elula